जसपाकाे अलमलले नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियामा अवराेध - Sankalpa Khabar
आजका पत्रपत्रिकामा वर्ष २०७७ को समिक्षात्मक समाचारहरुले स्थान पाएका छतन् भने अन्य समसामायिक विषयबस्तुले पनि स्थान पाएका छन् ।
आजबाट वि.स. २०७७ सकिएर वि.स. २०७८ सुरु भएको छ । २०७७ सालमा विभिन्न राजनितिक उतावचढावले देशको माहोल सधैं तातिरहेको थियो भने कोरोना समस्याले देश विदेशमा ठुलो असर पर्यो ।
नागरिक दैनिकले एमालेमा एकता ‘असम्भव’ दुवैतर्फका सम्पर्क सूत्र निराश शिर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ । एमाले संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिँदै समानान्तर समिति गठन गरिरहेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहसँग एकताको सम्भावना करिबकरिब सकिएको अध्यक्ष केपी ओली पक्षले जनाएको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक संघर्षमा जुटेको खनाल–नेपाल पक्षका पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिले गर्दा एकता कायम राख्नुको औचित्य नभएको र त्यसको सम्भावना पनि टरेको निष्कर्ष ओली समूहले निकालेको छ।
त्यस्तै सुखद हुन सकेन २०७७ को अर्थतन्त्र शिर्षकमा नागरिक दैनिकले अर्को समाचार छापेको छ । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको चपेटाका कारण एक वर्षको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्‍यो। निजी क्षेत्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिको अजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखे पनि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका लागि २०७७ सुखद हुन सकेन।
राजधानी दैनिक ले उथलपुथल २०७७ शिर्षकमा समिक्षात्मक समाचार लेखेको छ भने सरकार निर्माणका लागि दौडधूप तीव्र चलिरहेको बेला जसपा भने अलमलमा रहेको अर्को खबरलाई पहिलो पेजमा छापेको छ । सरकार निर्माणका लागि नेताहरूको दौडधूप भइरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरू अलमलमा छन् । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग समानान्तर रूपमा जसपा नेता छलफलमा भए पनि कोसँग सत्ता सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय अझै गर्न सकेका छैनन् ।
विकास खर्च कमजोर शिर्षकमा अर्को आर्थिक समाचार पनि राजधान दैनिकमा छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिने अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको २९.२२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत ९विकास० खर्च गरेको छ ।